Waa immisa lacagta laga jaran doono mushaharka Cristiano Ronaldo haddii ay Man United usoo bixi weyso tartanka Champions League xilli ciyaareedka dambe? – Gool FM
(Manchester) 22 Jan 2022. Sida lagu helayo wararka ka imaanaya dalka Ingiriiska, naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa qayb ka jareysa mushaharka ay siiso xiddigeeda weerarka ka ciyaara ee Cristiano Ronaldo haddii ay ku fashilanto inay usoo baxdo tartanka Champions League xilli ciyaareedka dambe.
Kabtanka Portugal ayaa haatan 385 kun oo gini toddobaadkii ka qaata garoonka Old Trafford kaddib markii xagaagii lasoo dhaafay Red Devils dib ugala soo saxiixatay naadiga Juventus, hase ahaatee, wargeyska The Athletic ayaa sheegay inay kooxdiisu ka jaran doonto 25% mushaharkiisa haddii uu ka caawin waayo inay usoo baxdo tartanka horyaallada Yurub xilli ciyaareedka dambe.
Tani waxay la micno tahay in xagaagan wixii ka dambeeya uu qaadan doono 300 kun oo gini asbuucii maadaama 25% mushaharkiisa la jartay.
Si kastaba ha ahaatee, Man United ayaa haatan qayb ka ah kooxaha isugu soo haray marxaladaha bug-baxda ee Champions League, waxayna heysataa fursad ay ku ciyaari karto xilli ciyaareedka dambe iyadoo xitaa lumisay afarta sare ee horyaalka Premier League, waana haddii ay hanato koobka dhego-weyne xilli ciyaareedkan.
Horudhac: Southampton vs Manchester City... (Waa sidee rikoorka la yaabka leh ee ay Saints ka heysato kulammada ay wajahdo kooxaha difaacanaya Premier League?)